တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: နှင်းစီးဖိနပ်လေး တရန်
Faces Magazine 2017 May
“Spare change, please!”
Tesco Supermarket မှ အထွက် ထိုအသံကို ကြားလိုက်ရသဖြင့် မာရီယာ ဖျတ်ခနဲလှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ မျှော်လင့်ထားသည့် အတိုင်းပင် သူ မဟုတ်ခဲ့။ ပိုက်ဆံအကြွေအိတ်ထဲမှ စတာလင်တပေါင်တန် အကြွေစေ့လေးတစေ့ကို ထိုသူ၏လက်ထဲထည့်ရင်း သက်ပြင်းဖွဖွ ချမိသည်။ ကျေးဇူးတင်စကားသံက မာရီယာ့ အနောက်တွင် တိုးညင်းစွာ ကျန်ခဲ့၏။ “Spare change, please!” တဲ့ … ။ ထိုအသံကြားတိုင်း မာရီယာ့စိတ်တွေ မလုံမလဲနှင့် တစုံတယောက် ဖြစ်လိမ့်နိုးနိုး အမြဲရှာဖွေမိသည်မှာ ကြာခဲ့လေပြီ။
မာရီယာက ဈေးဝယ်ထားသည့် တွန်းလှည်းလေးကို ကားရပ်နားရာဆီသို့ ခပ်သုတ်သုတ်တွန်းနေရင်း ကိုယ့်ခြေထောက်အစုံကို ယောင်ယမ်း၍ ငုံ့ကြည့်လိုက်မိသည်။ ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာနှင့် တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားသော လမ်းလျှောက်ဖိနပ် မီးခိုးရောင်ကလေး … ။
လမ်းများစွာလျှောက်လှမ်းဖို့ ဖိနပ်ကလေးတရန်က လူတိုင်းအတွက် မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ခြေလှမ်းတိုင်း လုံခြုံဖို့ရာ အတွက် ခိုင်မာသည့် ဖိနပ်ကလေးလည်း ဖြစ်ရမည် … မဟုတ်လား။
ဆောင်းလေအေးတချက် အဝေ့မှာ မာရီယာ့ဆံနွယ်တွေ ဝဲလွင့်သွားသည်။
“သြော် …. တဆောင်းသစ်ပြန်ပြီပဲ …”
မာရီယာ့အတွေးများက လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက ဆောင်းတညဆီသို့ … ။
အေးမြသော ဒီဇင်ဘာလ၏ ညတည။
မာရီယာ့အလုပ်၏ ခရစ်စမတ်ပါတီပွဲကို မြို့ကလေးရှိ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ မာရီယာက ဒီမြို့ကလေးသို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သည်မှာ ၆ လ ခန့်သာ ရှိသေးသည်။ ထိုမြို့ကလေးက ဗြိတိန်နိုင်ငံ ယော့ခ်ရှားနယ် အနောက်ပိုင်းရှိ မြို့ငယ်လေး။ မြို့ကလေးက သေးငယ်သော်လည်း တောင်ကုန်း တောင်တန်း လေးတွေ လမ်းကလေးတွေက အနိမ့်အမြင့်တွေနှင့်မို့ နေချင့်စဖွယ်။ အလုပ်ရှိရာ ထိုမြို့ကလေးသို့ ရောက်၍ သိပ်မကြာခင်မှာပင် မြို့ကလေးကို ချစ်ခင် ကျွမ်းဝင်သွားခဲ့သည်။ ဒေသထွက် ကျောက်အုတ်တွေနှင့် ဆောက်ထား သည့် အဆောက်အဦ ညိုညိုလေးတွေက မိဘများရှိရာ မာရီယာ့ ဇာတိချက်ကြွေ Midlands မြေနှင့် ကွာခြားသည့် အချက်တချက်ပင်။
ဒီမြို့ကလေးရောက်မှ ပထမဆုံးကြုံရသည့် ခရစ်စမတ်ပါတီအတွက် မာရီယာ အနည်းငယ် စိတ်လှုပ်ရှားမိ သေးသည်။ ခရစ်စမတ်ပါတီဆိုလျှင် ဝတ်လေ့ရှိသော အနီရောင် အစိမ်းရောင် စသည့် အရောင်တွေကို ငြီးငွေ့နေပြီမို့ မာရီယာက စိန်ပွင့်လို တလက်လက်တောက်ပနေသည့် ကျောက်ကလေးတွေ စီထားသည့် ခရမ်းရောင် dress ပေါ်မှာ သားမွေးကုတ် အဖြူရောင်လေး ထပ်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။ ဖိနပ်ကတော့ လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်လောက်က ဝယ်ခဲ့သော ခရမ်းဖျော့ရောင် ကြိုးသိုင်း ခွါချွန် ဖိနပ်အမြင့်ကလေး။
အလုပ်ထဲမှာ စာရွက်တွေ ဖိုင်တွေ ကွန်ပျူတာထဲက ကိန်းဂဏန်းတွေနှင့်သာ ခေါင်းမဖော်တမ်း အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ရသော မာရီယာတို့လို ငွေစာရင်းဌာန ဝန်ထမ်းများအတွက် ဒီလိုပါတီပွဲလေးတွေက စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ပြေလျော့စေသည့်အပြင် အချင်းချင်းလည်း ရင်းနှီးမှု နားလည်မှု ပိုရစေ၏။
“ဂွတ်အီးဗနင်း မာရီယာ … မင်း ဒီနေ့ သိပ်လှတာပဲ”
“ကျေးဇူးပါကွယ် … ဂွတ်အီးဗနင်းပါ၊ မင်းလည်း ခန့်ညားနေတာပဲ အိုင်ဗင်၊ မင်းတို့နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ကိုယ်က ခုလို ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာလေ”
အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်သံ ရယ်မောသံ၊ ဖန်ခွက်ချင်း ထိခတ်သံ၊ ဇွန်းသံ ခက်ရင်းသံ၊ သီချင်းသံတို့ဖြင့် ပါတီပွဲလေးက သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသည်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ လဲလှယ်ချိန်မှာတော့ ပြုံးပျော် ရယ်မောသံ ကျေးဇူးစကားသံ တို့ဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ။ ထိုအခိုက် မာရီယာ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ခရစ်စတင်းက ပြတင်းပေါက်ကို လှမ်းကြည့်ရင်း …
“ဟေး … အပြင်မှာ နှင်းတွေကျနေပြီကွ”
“ဝိုး …. နှင်းတွေ နှင်းတွေ …”
သီရိလင်္ကာသူလေး ရှီဟာနာ က နှင်းတွေမြင်တော့ ခုန်ပေါက်ဝမ်းသာပြီး စားသောက်ဆိုင် အပြင်ဘက်သို့ ပြေးထွက်ကာ နှင်းပွင့်ဖတ်တွေနှင့် ဆော့ကစား၍ နေသည်။ သူ့ဘဝမှာ ပထမဆုံးကြုံရသည့် နှင်းတွေ ဖြစ်မည်။ ကြာလာလျှင် သူလည်းပဲ နှင်းတွေကို ရိုးအီ စိတ်ပျက်သွားမှာပါ။
“မနက်က မိုးလေဝသ သတင်းမှာ ပြောထားသားပဲ၊ ဒီည နှင်းကျရင် ကျမယ်၊ မကျရင် မကျဘူးတဲ့ ဟားဟား” စတိဗ်က ရယ်ဟဟ ဆိုသည်။ ဘယ်တော့မှ အစိုးမရသော ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုကြောင့် မိုးလေဝသ သတင်းကြေငြာ သူတွေလည်း ရယ်ပွဲဖွဲ့ ခံကြရသည်။ တခါတရံ တနေ့ထဲနှင့် မိုးလည်းရွာ၊ နေလည်းသာ၊ နှင်းလည်း ကျတတ်သည် မဟုတ်လား။ ဒီထက်ပိုပြီး နောက်ထပ် ဘာများ ဖြစ်ချင်ပါသေးလဲ … ။
လက်ကျန်ဝိုင်အနီတခွက်ကို နောက်ဆုံးအနေနှင့် မော့သောက်လိုက်စဉ် ခေါင်းထဲမှာ ရီဝေဝေ … ။ ပျော်သည် … ပေါ့ပါး လွတ်လပ်သည် … ။ နက်ဖြန်က ရုံးပိတ်ရက်လေ … ဒီည မာရီယာ စိတ်ကြိုက် သောက်မှာပေါ့။
ရှီဟာနာက ဆိုင်ထဲသို့ ပြန်ပြေးဝင်လာရင်း …
“မာရီယာရေ … နှင်းတွေ တော်တော်ကျနေပြီကွ၊ စတိဗ်ရဲ့ စက်ဘီးတော့ နှင်းပုံထဲ နစ်နေပြီ ဒီမှာကြည့်စမ်း၊ တို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာတာ၊ တို့လည်း ခဏနေ ပြန်မှနဲ့ တူတယ်၊ မင်းရော ဘယ်ချိန်ပြန်မလဲ”
“ကိုယ်လည်း မကြာခင်ပြန်တော့မှာ ရှီဟာနာ … ကားက ရုံးက ကားပါကင်မှာ ရပ်ထားတယ်။ ဒီအတိုင်းဆို ကားနဲ့ ပြန်လို့ မဖြစ်တော့ဘူး၊ ကိုယ် လမ်းလျှောက်ပဲ ပြန်တော့မယ်”
အပူချိန် ရုတ်တရက် လျော့ကျသည့်အခါ ကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာ black ice ဟုခေါ်သော မမြင်ရသည့် ရေခဲလွှာ ပါးလေးတွေ ဖုံးတတ်သည်မို့ ကားမောင်းရတာ အန္တရာယ်များသည်။ ရုံးနှင့် ကပ်လျက်ရှိသော စားသောက်ဆိုင်ကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်မှာ ကံကောင်းသည်ဆိုရမည်။ ရုံးမှ မာရီယာ့အိမ်သို့ လမ်းလျှောက်ပြန်လျှင် နာရီဝက်ခန့်သာ ကြာ၏။
“တခါတလေတော့လည်း နှင်းတွေထဲ လမ်းလျှောက်ပြန်ရတာပေါ့လေ …”
“မာရီယာ … ပြန်တော့မှာလား … မင်းသောက်ထားတာဆိုတော့ ကားမောင်းလို့ မဖြစ်ဘူးထင်တယ်၊ ကိုယ်နဲ့ လိုက်ခဲ့မလား၊ ကိုယ့်အမျိုးသား လာကြိုမယ်တဲ့”
“မလိုက်တော့ဘူး ခရစ်စတင်း ကျေးဇူးပဲ၊ ကိုယ်လမ်းလျှောက်ပြန်မလို့”
“အိုး … နှင်းတွေ ဒါလောက်ကျနေတာ … မင်းအဆင်ပြေပါ့မလား၊ ခဏစောင့်လိုက်လေ ဘော့ဘ်ဆီ ဖုန်းဆက်လိုက် ဦးမယ်”
ခရစ်စတင်းက သူ့အမျိုးသား ဘော့ဘ်ထံသို့ ဖုန်းလှမ်းခေါ်ဖို့ ပြင်သည်။ ခရစ်စတင်းနှင့် မာရီယာ့ အိမ်ချင်းက တောင်နှင့် မြောက်မို့ သူ့ကို ဝန်မပိုစေချင်။ နောက်ပြီး မာရီယာ့အိမ်ဘက်က အတက်အဆင်း တောင်ကုန်းတွေ ဆင်ခြေလျှောတွေ ပိုများတာမို့ ဒီလိုအချိန်မှာ ကားမောင်းရ ပိုခက်နိုင်သည်။
“နေပါစေ အချစ်လေးရယ် … ကိုယ်အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒီလမ်း ဒီလမ်းတွေက အမြဲလျှောက်နေကျပါ၊ နှင်းတွေထဲလည်း မလျှောက်ရတာ ကြာပြီလေ … ဒီနှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးနှင်းတွေထဲ အမှတ်တရအနေနဲ့ လျှောက်လိုက်ဦးမယ်ကွာ”
“မယ်ရီခရစ္စမတ် မာရီယာ ကောင်းသောညပါ”
အားလုံးကို ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ပြီး စားသောက်ဆိုင်လေးကို ကျောခိုင်းထွက်လာခဲ့သည်။ လူသွားစင်္ကြံလမ်းပေါ်မှာ တင်နေသည့် နှင်းမွမွတွေကို ခြေဖြင့် တဇွိဇွိနင်းလျှောက်ရင်း မာရီယာ စိတ်ပေါ့ပါး လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်နေ၏။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ရုံးခန်းမှာ ပြန်ထားပြီး ခဏအကြာ မာရီယာသည် နှင်းများအောက်၌ လမ်းလျှောက် နေပေပြီ။ ဖြူဖွေးသော နှင်းပွင့်ဖတ်များက ထူထပ်စွာ တဖွဲဖွဲကျနေဆဲ။
ဆောင်းရာသီ၏ နှင်းကျသည့်ညမို့ အသွားအလာ ပြတ်လှသည်။ လမ်းလျှောက်နေသူ တဦးတလေမျှပင် လမ်းပေါ်မှာ မရှိ။ ကားတစီးစ နှစ်စီးစတော့ ဖြတ်သွားသည်ကို တွေ့ရ၏။ ဒီအချိန် ဒီရာသီမှာ ဘတ်စ်ကားတွေလည်း ထွက်တော့မည် မထင်။ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်ကလေး အလွန်မှာ ရထားလမ်း ခုံးတံတားအောက်မှ ဖြတ်ရမည်။ အဲဒီနားက နေ့ခင်းဘက်တောင် မှောင်ရိပ်နည်းနည်း ကျသည့်နေရာ။ ပြီးတော့ ထိုခုံးတံတားအောက်မှာ ပိုက်ဆံတောင်းရမ်းနေသူ အိမ်ခြေယာမဲ့တွေ ရှိတတ်သေးသည်။
ထိုသို့ တောင်းရမ်းစားသောက်နေသူတွေကို မာရီယာ နည်းနည်းမှ ဂရုတစိုက် မကြည့်ရှုမိသည့်အပြင် အထင်တသေးပင် ရှုံ့ချတတ်သေး၏။ ထိုသူတွေမှာ တချို့က အရက် သို့မဟုတ် မူးယစ်ဆေး စွဲနေသူများ ဖြစ်ပြီး တချို့ကတော့ စိတ်ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်နေသူများ၊ တချို့က အိမ်ခြေယာမဲ့ဖြစ်ပြီး တချို့ကတော့ အိမ်ယာရှိလျှက် တောင်းစားနေသူများ … ။
သူတို့ကို မာရီယာက “ကိုယ်တိုင် အလုပ်မလုပ်ဘဲ သူများငွေကို အညွန့်ခူးစားနေသူတွေ” … ဟုလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း မှတ်ချက်ချလေ့ရှိသည်။
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ထိုသို့ တောင်းရမ်းစားသောက်နေသူတွေ၏ တနေ့ဝင်ငွေမှာ စတာလင်ပေါင် ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ခန့်ရှိသည် ဆိုသည့် သတင်းကိုဖတ်ရပြီးသည့်နောက် သူတို့ကိုမြင်တိုင်း အလုပ်လုပ်ပြီး အခွန်ဆောင်နေသူတွေကို အားနာမိသည်။ ထိုသူတွေကို နေရာအမျိုးမျိုးမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် တွေ့ရတတ်၏။ စူပါမားကက်တွေ အထွက်မှာ၊ လူစည်ကားရာ မြို့လယ်ခေါင် City Centre မှာ၊ ရထားဘူတာရုံနှင့် ဘတ်စ်စတေရှင်တွေမှာ … ဖြတ်သွားသမျှတွေထံ “Spare change, please!” (ငွေအကြွေအပိုပါရင် ပေးပါ) ဟု တောင်းခံ၍ တမျိုး၊ လမ်းသွားနေတုန်း ဘေးမှကပ်ကာ “20p please” (အကြွေပြားနှစ်ဆယ်လောက်) စသဖြင့် တလီ၊ ခွေးတကောင်ဘေးမှာ ချ၍ ခေါင်းငိုက်စိုက်ထိုင်ကာ ခွက်တလုံးနှင့် ခွေးအတွက် အလှူငွေထည့်ပါဟု စာရေး၍ တသွယ် … အမျိုးမျိုး အဖုံဖုံ အလှူခံတတ်ကြသူတွေ။
ထိုသူတွေကို ပိုက်ဆံထည့်ဖို့ ဝေးစွ စေ့စေ့ပင်မကြည့်ဘဲ အထင်သေး ရှုံ့ချလေ့ရှိသည့် မာရီယာက မကြင်နာတတ်၍ မဟုတ်။ လစဉ် charity မှာ ထည့်ဝင် လှူဒါန်းတတ်သလို ကင်ဆာဝေဒနာသည်များ၊ နှလုံးရောဂါ ဝေဒနာသည် များအတွက် ရံပုံငွေရှာသည့် မာရသွန် ပြေးပွဲမျိုး၊ ဈေးရောင်းပွဲမျိုးတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လှုပ်ရှားလေ့ရှိသူ တစ်ဦး။ မာရီယာ့စိတ်သဘောက သိမ်မွေ့နူးညံ့သော်လည်း တပါးသူအပေါ် ခေါင်းပုံဖြတ် မတရားလုပ်သည်ဟု ခံစားရလျှင် ထိုသူတွေကို မနှစ်မြို့ချင်။
တကိုယ်တည်း အတွေးဖြင့် လမ်းလျှောက်ရင်း အေးသည်ထက် အေးလာပြီ။ စီးလာသည့် ခွါချွန်အမြင့် ကြိုးသိုင်း ဖိနပ်ကလည်း နှင်းထဲတွင် လျှောက်ရတာ အဆင်မပြေလှ။ ရှေ့ဆက်လျှောက်ရန် ဆယ့်ငါးမိနစ်သာသာလောက် လိုသေးသည်။ အားတင်းထား မာရီယာ ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးရင်း ရထားခုံးတံတားအောက်သို့ ရောက်လာ၏။
ထင်သည့်အတိုင်းပင် ရထားခုံးတံတားအောက်မှာ ခေါင်းခပ်ငိုက်ငိုက်ဖြင့် ထိုင်နေသည့် လူတယောက်က မာရီယာ့ကို မြင်သော် လက်တဖက် ဆန့်တန်းကာ …
“Spare change, please!” ဟု လှမ်းပြောသည်။
ငွေအကြွေအပိုပါရင် ပေးပါ … ဟု တောင်းရမ်းနေသူ အိမ်ခြေယာမဲ့တစ်ဦး။ မာရီယာ စိတ်ပျက်စွာကျွတ်ခနဲ စုတ်သပ်ရင်း ထိုသူ့ရှေ့မှ မဖြတ်ချင်သဖြင့် ရှောင်ရင်း ပလက်ဖောင်းပေါ်မှ ဆင်းလိုက်သည်။
“အိုး ……. သေပါပြီ ….”
ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားဘဲ ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ယိုင်ခနဲဖြစ်သွားသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ထိန်းစဉ် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း မာရီယာ့ခြေတဘက်က နိမ့်ဆင်းကျွံကျသွားတော့၏။
သွားပြီ … သေလိုက်ပါတော့ မာရီယာ …
စီးလာသည့်ဖိနပ်၏ ခွါချွန်ဒေါက်တဖက်က လူသွားပလက်ဖောင်း ဘေးရှိ ရေမြောင်းအဖုံး သံတန်းများကြားသို့ လှလှပပလေး ညပ်ဝင်သွားခဲ့လေပြီ။ မာရီယာက စိတ်ပျက်စွာ အသံတိတ် ဆဲရေးရင်း ဖိနပ်ကို ချော့၍ ပြန်ထုတ်သော်လည်း မရ … ။
စက္ကန့်သုံးဆယ်လောက်ပင် ကြာလိုက်မည်ထင်သည်။ ချွဲသလိပ်ကပ်နေသော လည်ချောင်းရှင်းသံကြီးနှင့်အတူ ဆေးလိပ်နံ့ ချဉ်စုတ်စုတ်နံ့ စိုထိုင်းထိုင်း အောက်သိုးသိုးအနံ့ ပေါင်းစုံရောပြွမ်းလျက် ထိုသူက မာရီယာ့အနားသို့ ရောက်လာသည်။
“ဟင် … ရှင် …”
“ခဏလေး ငြိမ်ငြိမ်နေပါ မိန်းကလေး”
ထိုသူက မာရီယာ့ခြေရင်းမှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး သူ၏ သားရေလက်အိတ် ညစ်ထပ်ထပ်ကြီးကို ချွတ်လိုက် သည်။ မာရီယာ့ခြေထောက်က ဖိနပ်သိုင်းကြိုး buckle ကို ဖြုတ်ပေးလိုက်သည့် ခဏမှာ မာရီယာ့ ခြေထောက်လေး လွတ်လပ်သွားသော်လည်း ဖိနပ်တဖက်ကတော့ မြောင်းဖုံးသံတန်းများ ကြားတွင် ညပ်နေဆဲ။
“မင်း ဟိုနေရာမှာ ခဏသွားထိုင်နေ”
သူက သူနဂိုထိုင်ခဲ့သည့် ပလတ်စတစ် အခင်းစကို ညွှန်ပြရင်း ပြောသည်။ အို … မာရီယာ မထိုင်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဖိနပ်မပါသော ခြေတဖက်ဖြင့် ထော့နဲ့နဲ့သွားကာ သူ့အခင်းစနားသို့ သွားရပ်ရင်း သူလုပ်သမျှ လှမ်းကြည့်နေလိုက်၏။ သူက ညပ်နေသော ဖိနပ်ကို တန်းများကြားမှ အားဖြင့် နှဲ့ထုတ်နေသည်။
“ဟုတ်ပြီ … ဖုန်းဆက်ပြီး တက်ခ်စီခေါ်ရမယ်”
ရုတ်တရက် အကြံရသဖြင့် လက်ကိုင်အိတ်ထဲမှ ဖုန်းကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဖုန်းက ဘက်ထရီကုန်နေပြီ။ ပါတီမှာ ဖုန်းဖြင့်ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရင်း အားကုန်သွားတာပဲ ဖြစ်မည်။ ခက်တာပဲ။ မာရီယာ့စိတ်တွေ ရှုပ်ထွေးလာ၏။ သောက်ထားသော ဝိုင်အရက်ရှိန်တောင် ပြယ်လုလု။
အရောင်မပီပြင်သော ကုတ်အင်္ကျီ ညစ်နွမ်းနွမ်းကို ဝတ်ဆင်ကာ သိုးမွေးဦးထုပ်ထူကြီးကို ဆောင်းထားသော ထိုလူက မာရီယာ့အနား ပြန်ရောက်လာပြီး …
“ကျွန်မနာမည် မာရီယာ မက္ကန်ဇီပါ … မာရီယာလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်”
“အင်း … မာရီယာ … ငါ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ မင်းဖိနပ်က သုံးမရတော့ဘူး၊ ခွါပြုတ်သွားပြီ”
“ဒုက္ခပါပဲ … ကျွန်မ အိမ်ရောက်ဖို့ နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရဦးမယ်၊ ဒီပုံစံကြီးနဲ့ ဘယ်လိုလျှောက်ရပါ့မလဲ၊ ဖုန်းကလည်း ဘက်ထရီဖလက် ဖြစ်နေပြီ”
သူက အင်္ကျီအိတ်ထဲမှ တစုံတခုကို ထုတ်လိုက်သည်။ ဆေးလိပ်ဆေးဗူးကလေး၊ စက္ကူပါးတရွက်ကို ထုတ်ကာ ဆေးဗူးထဲမှ ဆေးမှုန့်လေးတွေထည့် လိပ်ပြီး မီးခြစ်၍ ညှိသည်။
“ငါ့ကို ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ပြုပါ မာရီယာ”
“ဟင်း … ရပါတယ် ရှင့်သဘောပါ၊ ကျွန်မတော့ ဒီည သေချင်တော့တာပဲ”
တောင်းစားသူတွေကို စက်ဆုပ်သည့် မာရီယာက ထိုသူမျိုးနှင့် စကားလက်ဆုံကျနေရသည့် အဖြစ်။ စိတ်ညစ်သည်မှာ ပြောဖွယ်ရာပင် မရှိတော့။
“မာရီယာ … မင်း စိတ်ညစ်နေတာလား၊ လောကကြီးမှာ ဒါက အသေးအဖွဲပါကွာ”
“အင်း … ရှင့်အတွက်တော့ ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်”
“မင်းကို ကြည့်ရတာ စိတ်မသက်သာလိုက်တာ မာရီယာ … ဘာလဲ ငါ့လို အိမ်ခြေယာမဲ့ သူတောင်းစား တယောက်နဲ့ စကားပြောရတာ မင်း မနှစ်မြို့ဘူး ထင်တယ်”
မာရီယာလည်း စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် တည့်တိုးသာ ပြောမိလိုက်သည်။
“ဟက် ဟက် ဟက်”
သူက ခြောက်ကပ် အက်ကွဲသော ရယ်သံဖြင့် မရယ်ချင့်ရယ်ချင် ရယ်ရင်း အခင်းစ အစွန်းတွင် ဝင်ထိုင် လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျောပိုးအိတ်ကြီးကို ဖွင့်၍ တစုံတခုကို ဆွဲထုတ်လိုက်သည်။
“တဆိတ် ထိုင်စမ်းပါ မာရီယာ”
“အို … ရှင့်ကိုတော့ အားနာပါတယ်၊ ကျွန်မ မထိုင်ချင်ပါဘူး”
“ကောင်းပြီလေ … ကဲ … ဒီမှာကြည့်”
ကျောပိုးအိတ်ထဲမှ ဆွဲထုတ်လိုက်သည်က ပက်ကင်စက္ကူလှလှလေးဖြင့် ထုတ်ပိုးထားသော ပစ္စည်းတခု။
“မင်း ဒါကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ မာရီယာ”
မာရီယာ့ထံ လှမ်းပေးရင်း သူက ပြောသည်။ မာရီယာလည်း ယောင်အမ်းအမ်းဖြင့် လှမ်းယူမိလိုက်သည်။ “ဘာများပါလိမ့်”
သိချင်စိတ်ကြောင့် မာရီယာက ပက်ကင်စက္ကူလေးကို မပြဲအောင် သတိထားကာ ဖွင့်လိုက်သည်။ အတွင်းမှာက ဗူးကလေး။
သေချာပါသည်။ ဒါဟာ ဖိနပ်ဗူးကလေးပဲပေါ့။ အဖုံးလေး လှပ်လိုက်တော့ နှင်းထဲတွင် စီးရသည့် မိန်းမစီး လည်ရှည်ဖိနပ် ပန်းရောင်ကလေး တရန်။
“အို … ဒီဖိနပ်က …”
နှင်းများက သည်းထန်စွာ ကျဆင်းနေသည်။ ထိုလူက ချောင်းတဟွတ်ဟွတ်ဆိုးရင်း …
“မင်းတို့အမြင်မှာ ငါဟာ အိမ်ခြေယာမဲ့ သူတောင်းစားတယောက်ပေါ့ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မာရီယာ၊ တကယ်တော့ ငါ့မှာ အိမ်နဲ့ ယာနဲ့ မိသားစုနဲ့ပါကွယ် … တခါတုန်းကပေါ့ …
“ငါက ဥရောပနိုင်ငံငယ်ကလေး တခုဆီကပါ၊ အဲဒီက ကျေးလက်ရွာကလေးမှာ ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ အိမ်လေးတလုံး ရှိတယ်၊ ငါစိုက်ပျိုးထားတဲ့ ယာခင်းလေးရှိတယ်၊ ငါချစ်တဲ့ ဇနီးနဲ့ သမီးချောလေး တယောက်လည်း ရှိတယ် …
“ငါတို့သိပ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတဲ့ ရက်တွေပေါ့ မာရီယာ … ။ ဒါပေမဲ့ … ငါ့ယာခင်းလေး မအောင်မြင်တဲ့နှစ်မှာ … စီးပွါးရေးတွေ ကျပြီး အိမ်ထောင်ရေးလည်း သိပ်အဆင်မပြေတော့ဘူး၊ လင်မယား ကတောက်ကဆဖြစ်တဲ့ ရက်တွေ ဆက်လာတယ်။ ပိုဆိုးတာက ငါတို့နေတဲ့ရွာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ ငါ့မိန်းမက ဖောက်ပြန်တော့ ဟိုးလေးတကျော်ပေါ့၊ သူနဲ့ကွဲပြီးနောက် ငါလည်း အရက်တွေ အလွန်အကျွံသောက်ပြီး ယာခင်းကိုလည်း ပစ်ထားခဲ့မိတယ်။ အရွယ်ရောက်စ ပြုနေတဲ့ သမီးလေးက ဒီအခြေအနေတွေကို ရင်ဆိုင်ရတာ ရှက်တယ်ဆိုပြီး အင်္ဂလန်ကို ကျောင်းတက်ဖို့ သူ့ဘာသာသူ တိတ်တိတ်ကလေး ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အချိန်တိုင်း မူးနေတဲ့ငါက ဒါတွေကို မသိခဲ့ဘူး မာရီယာ …
“ငါသိလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့ သမီးလေး အိမ်ကထွက်သွားခဲ့ပြီ။ ငါ့အတွက် စာတစောင်ပဲ ချန်ထားခဲ့တယ်။ သူ ပြန်မလာတော့ဘူး … တဲ့။
“အဲဒီတော့မှ သမီးလေး အခန်းကို မွှေနှောက်ရှာရင်း သူ့ခံစားချက်တွေကို ငါသိရတော့တယ်၊ ငါတို့လင်မယား ကတောက်ကဆ ဖြစ်ကြတဲ့အခါ သူစိတ်ဒဏ်ရာတွေ ရခဲ့တယ်။ သူ့အမေ အိမ်ကထွက်သွားပြီး သူနဲ့ငါ နှစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့ချိန် ငါသူ့ကို ဂရုမစိုက်တဲ့အခါ သူ အထီးကျန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး ငါသူ့ကို Snow boots (နှင်းစီးဖိနပ်) လေးတရံ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် ပေးမယ်ဆိုတဲ့ နှုတ်ကတိမတည်ခဲ့မိတာကို သူ အတော်လေး ကြေကွဲခဲ့ရသတဲ့ မာရီယာရယ် … ။
“စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ငါ ငိုမိတယ်၊ ငါဟာ ဖခင်မပီသတဲ့သူပါ၊ သမီးလေးကို စိတ်ဒဏ်ရာတွေ ပေးမိတယ်၊ သမီးလေးကို ပေးထားတဲ့ ကတိလေးတခုတောင် ငါမတည်နိုင်ခဲ့ဘူး၊ ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲ”
သူ့မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေ ခိုတွဲနေပြီ။ သူ့ကိုကြည့်ရင်း မာရီယာ အသက်ရှူမဝသလို ရင်ထဲ တင်းကျပ်မောပန်း၍ နေသည်။ သူက ဆေးလိပ်နောက်တလိပ် ထပ်လိပ်ကာ မီးညှိ၍ ဖွာရင်း …
“နောက်တော့ …. သမီးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အလှဆုံး နှင်းစီးဖိနပ်လေး တရံဝယ်ပြီး အင်္ဂလန်ကို ငါရောက်လာ ခဲ့တယ်၊ သူ ကျောင်းတက်မယ်ဆိုတဲ့ မြို့အပါအဝင် နေရာ တော်တော်များများမှာ လှည့်ပတ်ရှာခဲ့တယ်၊ တရက် ငါ သိပ်မောပြီး ပန်းခြံအဝင်ပေါက်မှာ ခြေပစ်လက်ပစ် ထိုင်နေတုန်း အမျိုးသမီးတယောက်က ပိုက်ဆံလာပေးသွားလေရဲ့၊ ဒီလိုနဲ့ တယောက်ပြီးတယောက် အကြွေစေ့လေးတွေ လာပေးကြတယ်၊ ငါလည်း ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေနဲ့ လမ်းစရိတ်လုပ်လိုက်၊ စားလိုက် သောက်လိုက်နဲ့ သူတောင်းစားတယောက် ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာခဲ့တာ … နောက်ဆုံး Spare change, please လို့ နှုတ်ကဖွင့်ဟ တောင်းမိတဲ့အထိပဲ … မာရီယာ”
“သူ ရှင့်ကို လုံးဝမဆက်သွယ်ဘူးလား”
“ရှင် ဒီအတိုင်း ဘယ်ချိန်ထိ ဆက်ရှာနေဦးမှာလဲ …”
“အခု မင်းနဲ့ မတွေ့ခင်အထိ ငါ ရှာနေခဲ့တာပေါ့၊ မင်းလက်ထဲက ဖိနပ်ကလေးဟာ ငါ့သမီးလေးကို ခရစ်စမတ် လက်ဆောင်ပေးဖို့ ဝယ်ထားတဲ့ ဖိနပ်ကလေးလေ၊ သိပ်လှတယ် မဟုတ်လား မာရီယာ၊ ဒီဖိနပ်လေးကို မင်းယူသွားပါ၊ မင်းစီးသွားပါ … ငါ မင်းအတွက် ခရစ်စမတ်လက်ဆောင် ပေးပါတယ်”
“မဟုတ်တာရှင် ကျွန်မ ဝယ်မှာပါ ပိုက်ဆံပေးပါမယ်”
“မင်း ဘယ်လောက် ပေးမှာမို့လဲ မာရီယာ၊ သမီးလေးကို ဒီဖိနပ်လေးပေးနိုင်ဖို့ ငါ မြို့ရွာအနှံ့ လမ်းတကာအနှံ့ သူတောင်းစားတယောက်လို လိုက်ရှာဖွေခဲ့တယ်၊ ဒီဖိနပ်လေးထဲမှာ သမီးလေးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတွေ စေတနာတွေအပြင် ငါပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်နဲ့ ငါ့သိက္ခာ၊ ပြီးတော့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ငါ့နှလုံးသား … အားလုံးပေါင်းစပ် ပါဝင်နေခဲ့တာလေ … ဒါတွေကို မင်းက ငွေကြေးဘယ်လောက်နဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်ဦးမလို့လဲဟင်”
သူက ဆက်၍ …
“ငါ့သမီးလေးကို ပေးမယ့်ဖိနပ်လေး မင်းကို လက်ဆောင်ပေးလိုက်တာဟာ ငါဆောင်ရွက်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို အဆုံးသတ်လိုက်တာပါပဲ၊ သမီးလေးက အခုလောက်ဆို လူကြီးတယောက် ဖြစ်နေပါပြီ၊ သူ့အတွက် ဒီဖိနပ်လေး လိုအပ်တော့မှာ မဟုတ်သလို ငါ့ကိုလည်း လိုအပ်တော့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ ဒါကြောင့် ငါ သူ့ကို ဆက်မရှာတော့ဘူး မာရီယာ၊ ငါ့တိုင်းပြည်ကို ငါပြန်တော့မယ်၊ ငါ့ရွာကို ငါပြန်မယ်၊ ငါ့ယာခင်းလေးမှာ သစ်ပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးရင်း ငါ့ဘဝရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးတော့မယ် … ။
“ဖိနပ်လေး စီးကြည့်ပါဦး မာရီယာ … မင်းခြေထောက်ကို ခုနက ငါမြင်ရသလောက်တော့ သမီးလေးနဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး၊ ဆိုက် နံပါတ် ၅ ဆို မင်းနဲ့ တော်တယ် မဟုတ်လား”
“ကွက်တိပါပဲရှင် … ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ ရှင်ရယ် … ဒါနဲ့ ရှင့်နာမည် ကျွန်မ မသိရသေးဘူးနော်”
“လမ်းပေါ်က ကလေကချေ ဥရောပသား သူတောင်းစား လို့သာ မှတ်ထားလိုက်ပါ မာရီယာရယ်”
မာရီယာ၏ ကျန်ဖိနပ်တဖက်ကို သူကညင်သာစွာ ဖြုတ်ပေးပြီး နှင်းစီးဖိနပ်လေး စွပ်ပေးသည်။ အေးစက်ထုံကျင်နေသော မာရီယာ့ခြေထောက်များအား ဖိနပ်လေးက နွေးထွေးလုံခြုံမှုကို ဖြစ်စေ၏။ မာရီယာက တချိန်လုံး ရပ်နေရာမှ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ထို့နောက် လက်အိတ်များကို ချွတ်လိုက်ကာ သူ့လက်နှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီး …
“ကျွန်မ ရှင့်ကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး၊ ကျေးဇူးပြုပြီး နက်ဖြန်ဒီနေရာမှာ ကျွန်မကို စောင့်နေပေးပါ၊ ကျွန်မ ရှင့်ကို ကျေးဇူးတုန့်ပြန်ပါရစေ … ကျွန်မ အနူးအညွတ်တောင်းဆိုတာပါရှင်”
ဟု မာရီယာက ပြောတော့ … သူ့ကြမ်းရှရှ လက်အစုံကို မာရီယာ့လက်ထဲမှ ပြန်ရုန်းထွက်ရင်း မရိတ်မသင်ထားသည့် မုတ်ဆိတ်မွေး နီကျင်ကျင်တွေကို တချက်ပွတ်လိုက်ကာ သူက ပြုံးသည်။
“နောက်ကျနေပြီ မာရီယာ … မင်း သွားပါတော့ကွယ်၊ ကောင်းသောညပါ မိန်းကလေးရေ …”
မာရီယာ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ရသည်။ သူ့ကို စေ့စေ့ကြည့်ကာ …
“ကောင်းသောညပါရှင် … ဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်ပါစေ”
နှုတ်ဆက်ရင်း ကျောခိုင်းခဲ့ရတော့သည်။ မာရီယာ့ဖိနပ်ကလေးကတော့ သူနှင့်အတူ နှင်းတောထဲ၌ ကျန်ရစ်ခဲ့လေပြီ။
ဒီ့နောက်မှာ သူ့ကို မာရီယာ ပြန်မတွေ့ခဲ့ရတော့။ သူပြောတဲ့အတိုင်း သူ့တိုင်းပြည်ကို ပြန်သွားခဲ့ပြီလား။ သူ့ယာခင်းလေးထဲမှာ အပင်တွေ စိုက်ပျိုးနေပြီလား။ သူနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်း တောင်းရမ်းစားသောက်သူတွေကို မာရီယာ လျစ်လျူမရှုမိတော့။ စာနာစွာ တကျပ် တပြား စွန့်ကြဲလှူဒါန်းခဲ့ဖြစ်သည်။
မာရီယာသည် Spare change, please! ဆိုသည့် အသံကြားတိုင်း သူ ဖြစ်လိမ့်နိုးနိုး စေ့စေ့ကြည့်ရှုရင်း နှင်းသည်းထန်သော တခါက ဆောင်းညတညကို သတိရမိနေပါတော့သည်။
(၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလထုတ် Faces မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိ)
Posted by မေဓာဝီ at 12:13 PM